Himilada 2aad: Hufnaanta iyo lahaanshaha - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Kala duwanaanta. Sinaan. Ka mid noqoshada
Guddiga Dugsiga Minnetonka iyo Maamulka Degmada waxay rumeysan yihiin ka go'naanshaha kala-duwanaanta, sinnaanta, ka-mid noqoshada, dhaqanka heer caalami ah iyo heer sare ee ku saleysan cunugga inuu xoojiyo Iskuulada Dadweynaha Minnetonka. Waxaa naga go'an inaan sii xoojino fahamkeena ku saabsan isirrada iyo arrimaha dhaqan-dhaqaale ee waxqabadka tacliimeed iyo inaan ogaanno istiraatiijiyado cusub oo lagu xirayo dhammaan farqiga u dhexeeya guusha. Waxaan aaminsanahay in ardayda dareema dareemo lahaansho ama isku xirnaasho iskuulkooda ay u badan tahay inay la kulmaan guul gudaha iyo banaanka fasalka. Lahaanshaha waxaa lagu qeexaa himiladan sidii dareen xoogan oo xiriir wanaagsan, aqbalaad iyo muhiimad ahaan xubin ka ah bulshada Dugsiyada Minnetonka, iyadoon loo eegin jinsiyada, diinta, jinsiga, nooca galmada, wadanka uu ka soo jeedo, iyo xaalada dhaqan dhaqaale. Waxaan u heellan nahay inaan si hagar la'aan ah ugu shaqeyno siinta jawi dugsi oo dhammaan ardayda ay dareemaan ammaan, soo dhaweyn, taageerid iyo aqbalaad.
Guddiga Dugsiga Minnetonka wuxuu soo saaray taxane talaabooyin wax lagu qiyaasi karo, macno leh iyo ula kac ah oo loogu talagay degmada si kor loogu qaado lahaanshaha dugsiyadeena. Waxaa naga go'an ficil iyo isbedelada lama huraanka ah. Waxaan rajeyneynaa inaan iskaashi la yeelano ardayda, waalidiinta, shaqaalaha iyo xubnaha bulshada shaqadan muhiimka ah. Laguma sameyn doono go'doon waxayna u baahan tahay tixgelin feker ah. Guddiga Dugsiga iyo hoggaanka degmadu waxay u dhageysan doonaan si naxariis leh, waxay baari doonaan waxayaga u gaarka ah waxayna go'aamin doonaan waxa aan sidoo kale sameyn karno si aan u hubinno dhammaan ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha inay dareemaan nabadgelyo iyo aqbalaad. Waxaan qayb ka noqon doonnaa xalka, waxaan tusaale u noqon doonnaa oo waxaan sii wadaynaa dhageysiga iyo barashada. Ballanqaadkeena ka-mid ahaanshaha iyo heer sare ee carruurta ku saleysan wuxuu aasaas u noqon doonaa dadaalkeenna oo dhan.
Tani waxay noqon doontaa dadaal sannado badan ah. Sanad dugsiyeedka 2020-2021, Degmadu waxay:
Daabacida Ballanqaadka Minnetonka ee Hufnaanta iyo Haysashada kaas oo faahfaahin ka bixin doona waxa ay aaminsan tahay Degmada iyo sida ay uga go'antahay kala-duwanaanta, sinnaanta, ka mid noqoshada iyo heer sare. Tan waxaa la dhammaystiri doonaa Sebtember 2020.
Daabac qorshe hawleed, Tusaha Kheyraadka iyo Websaydh dadaalladaas. Kheyraadka bilowga ah waxaa la heli doonaa Sebtember 2020, oo cusbooneysiin ayaa lagu sameyn doonaa sannad dugsiyeedka oo dhan. Tan waxaa ka mid noqon doona, laakiin aan ku koobnaan doonin, wadaagida shaqada lagu qabtay barnaamijyada Caqabadaha Guusha iyo Reimagine Minnesota.
Samee dib u eegis qoto dheer oo ku saabsan aragtida guddiga iyo siyaasadaha degmada # 504, 514, 534, 604, 607 adoo adeegsanaya muraayadaha kala duwanaanta, sinnaanta, ka mid noqoshada iyo heer sare.
Warbixin ku saabsan dadaalka Guddiga lahaanshaha. Warbixinnada waxaa loo gudbin doonaa Guddiga Iskuulka Oktoobar 2020; Febraayo 2021; iyo Meey 2021. Warbixinnada waxaa ku jiri doona talooyin ku saabsan ficillada. Tan waxaa ka mid noqon doona ku darista guddiyada heerarka dugsiga hoose iyo dhexe.
Qiimee hanaanka dib u eegista manhajka / Nidaamka # 606 si loo hubiyo inay soo dhaweyneyso kala duwanaanta, sinaanta, ka mid noqoshada iyo heer sare. Tan waxaa la dhammaystiri doonaa Diseembar 2020 waxaana loo keeni doonaa Guddiga si loo ansixiyo. Nidaamka dib loo eegay waxaa looga faa'iideysan doonaa howsha dib u eegista manhajka laga bilaabo Janaayo 2021. Ku dar waxyaabaha sida ugu habboon meesha ay ka jiraan nusqaanno manhajka ku meel gaarka ah.
U samee ugu yaraan laba kal-fadhi oo tababar khasab ah dhammaan shaqaalaha, ardayda iyo xubnaha guddiga dugsiga ee ku saabsan kala-duwanaanta, sinnaanta, ka mid noqoshada iyo heer sare. Hal kulan ayaa la dhamayn doonaa simistar kasta. Degmadu waxay ku dari doontaa tababarka shaqaalaha iyo guddiga dugsiga howlaha nashaadaadka.
Samee qorshe waxqabad si aad ulashaqeyso ardayda, waalidiinta, shaqaalaha, qalinleyda iyo xubnaha bulshada. Tan waxaa ka mid noqon kara dadaallada sida fadhiyada dhageysiga, sahannada, aaladaha warbixinta iyo habab dabagal ah. Nidaam lagu soo wargeliyo arrimaha iyo welwelka leh kala duwanaanta, sinnaanta iyo ka mid noqoshada ayaa sidoo kale lagu dari doonaa.
Go'aaminta ilaha shaqaalaha ama ilaha dhisme kasta si loo taageero qorshooyinka ka tirsan. Hubso in ardeydu ka warqabaan oo ay marin u heli karaan ilahaan.
Dib u eegis ku samee waxqabadyada shaqaalaynta si loo sii dhiirrigeliyo shaqaalaynta shaqaalayaal ka soo kala jeeda meelo kala duwan, gaar ahaan dadka BIPOC iyo LGBTQIA +, si loo kobciyo jawiga waxbarasho ee dhammaan ardayda iyadoo loo marayo aragtiyo kala duwan, aqoonsiyo iyo khibrado kala duwan. Samee ugu yaraan seddex waxqabad oo qoritaan ah oo loogu talagalay dadaalkan.